Incazelo yobuchwepheshe be-STE-series Machine -Wuxi Daya Technology Co, Ltd.
I-600 Ton Straight Side Double Point Crank Precision Press
1 Isisetshenziswa semodeli, igama nobungako:
600Tkuqonde uhlangothi kabili iphuzu crank ngokunemba cindezela
Ukukhanyiswa kwesikhunta + ukuguqulwa kwemvamisa + kawoyela omncane ohambisa idivayisi yokuthambisa + iklatshi emanzi
2 Izidingo zamandla nezemvelo
Voltage Amandla kagesi: 380V ± 10%, izigaba ezintathu-izintambo ezinhlanu
Pressure Ingcindezi yomoya: ingcindezi 0.6 ~ 0.8mpa
Temperature Ukushisa okusebenzayo: -10 ℃ ~ 50 ℃
Umswakama osebenzayo: ≤ 85%
3 Izinsiza kusebenza zokuqalisa
I-GB / T 10924-2009 《Ukunemba kohlangothi oluqondile lokunyathelisa ngomshini》
⑵ GB / T5226.1-2002 《Izidingo ezijwayelekile zobuchwepheshe zemishini yezimboni nemishini kagesi》
⑶ GB5226.1—2002 equipment Izinsimbi zokuphepha ezisebenza ngemishini - okuyingxenye I yezimo ezijwayelekile zobuchwepheshe》
⑷ JB / T1829-1997 conditions Izimo ezijwayelekile zobuchwepheshe bokushicilela umshini》
⑸ GB17120-1997, Ukuphepha nezimo zobuchwepheshe zokwakha imishini》
⑹ I-JB / T9964-1999 requirements Izidingo zobuchwepheshe bezinhlangothi eziqondile zemishini》
JB / T8609-1997 《Zokushisela izimo lobuchwepheshe ekwakheni cindezela》
3.1 Okokusebenza kuhambisana nezinga lokuhlolwa ngokunemba kwe-JIS level 1:
IJapan JIS 1 ikilasi
Flatness - Inani Elivumelekile ezansi kwebhentshi elingezansi（Mm）
Ukufana - inani elivumelekile phakathi kwendawo engaphansi yesilayidi nebhentshi lomsebenzi ophansi（Mm）
Ukuma kwesilayida kuye phezulu naphansi nendawo ephansi yebhentshi - inani elivumelekile（Mm）
Ukuma - inani elivumelekile lomgodi we-die shank endaweni engaphansi yesilayidi（Mm）
Ukususwa okuphelele - inani elivumelekile lomshini osebenzayo ophezulu nophansi（Mm）
4 Main imingcele imishini
Insimbi yensimbi ebalulekile yokushisela
UKn / Ton
Isakhiwo sesilayidi somhlahlandlela wesilayidi
Amaphuzu amabili nezindlela eziyisithupha
Ubude beSlider travel
Ubukhulu bemodi modulus
Uhambo oluqhubekayo ngomzuzu
Izikhathi / Ubuncane
Usayizi webhentshi elingenhla (kwesobunxele nangakwesokudla x ngaphambi nangemva)
Usayizi webhentshi lomsebenzi ophansi (kwesobunxele nangakwesokudla x ngaphambi nangemva)
I-Main motor power + frequency converter
55 x 4 + Isiguquli semvamisa
Ukucindezela komthombo womoya
Izinga 1 laseJapan JIS
5. Izidingo zobuchwepheshe
5.1 Izici nezakhiwo ezisemqoka
(1) ukwelashwa okuqeda imvamisa kwesitimela somhlahlandlela wesilayidi, ubulukhuni ngaphezu kwe-hrc45,
Izinzuzo:ngcono kakhulu ukugqoka ukumelana. (abanye abakhiqizi abanayo imishanguzo yokuqeda imvamisa ephezulu)
(2) Ubulukhuni bendawo yesitjheleli nesitimela esiqondisa umhlahlandlela bufinyelela ku-ra0.4-ra0.8,
Izinzuzo:ukucacisa okuphezulu nokugqoka okuphansi. (akukho ukwelashwa okucimayo nokugaya okuvela kwabanye abenzi)
(3) The flatness wesilayidi somhlahlandlela wesitimela ngu-0.01mm / m, futhi ukunemba kuphezulu.
Izinzuzo:ukunemba kuthuthukiswa kakhulu. (Abanye abakhiqizi ngenhla 0.03mm / m)
(4) Zonke izingxenye zethu zesifunda somoya yi-SMC Japan. (abanye abakhiqizi ngokuvamile basebenzisa imikhiqizo yasekhaya).
(5) Sisebenzisa uhlobo lwe-American MAC lomoya wokufafaza i-solenoid valve, enokuzwela okuphezulu kokuphendula komoya.
(6) I-crankshaft eyenziwe nge-42crda ihamba phambili e-China
Izinzuzo:amandla angama-30% aphezulu kunalawo angama-45 ensimbi, futhi impilo yensizakalo yinde. (abanye abakhiqizi ngokuvamile basebenzisa insimbi engu-45)
(7) Umkhono wethusi wenziwe nge-zqsn10-1 (Tin Phosphorus Bronze) (efana nomkhono wethusi we-Aida). Abanye abakhiqizi bamukela i-bc6 (amandla amakhulu ethusi, owaziwa nangokuthi i-663 yethusi), anamandla angama-50% aphezulu (ingcindezi engaphezulu) kunethusi ejwayelekile, futhi amelana nokugqokwa futhi aqinile, Ukunemba okude nempilo yesevisi ende.
(8) Konke ukubhobhoza kwethu kungu Φ 6, futhi isifunda samafutha bushelelezi futhi akulula ukuvimba. (abanye abakhiqizi bavamise ukusebenzisa Φ 4)
(9) Isihlalo sebhola sisebenzisa ingxubevange yethusi yaseJapan i-TM-3 (into efanayo ne-Aida)
Izinzuzo: amathuba okuluma ancishiswe kakhulu (abakhiqizi abajwayelekile bayinsimbi yensimbi).
Impact Umthelela kwezemvelo
Lo mkhiqizo awunawo umthelela omubi emvelweni futhi ngeke ukhiqize igesi eyingozi.
◆ Ukuphathwa nokufakwa
⑴ Ukuthuthwa nokugcinwa kwemishini:
① Imishini yamukela izinyathelo ezifanele zokulwa nokugqwala, zokulwa nokudlidliza nezokulwa nomthelela kunqubo yokupakisha, engaqinisekisa ukuthuthwa nokugcinwa kwe-5 ° c ~ 45 ° c.
② Uma okokusebenza kuthuthwa futhi kugcinwa, kufanele kunakwe kukho. Okokusebenza nokupakisha kwangaphandle akufanele kuvezwe ngqo emvuleni noma emanzini, futhi ukupakisha kwangaphandle akufanele kulimale.
⑵ Ukuphakanyiswa kwemishini:
Lapho uphakamisa futhi ukhipha nge-crane, ezansi noma ohlangothini lomkhiqizo ngeke kubhekane nokushaqeka noma ukudlidliza okunamandla.
Susa bese uhlanza ifilimu lepulasitiki elisongwe ngaphandle, susa ipulagi, bese ufaka isixhumi sepayipi le-PU1 nepayipi le-PU, ubude bepayipi le-PU cishe liyi-700mm.
5.2 Isakhiwo esiyinhloko
Parts izingxenye Mechanical
Uzimele ushiselwe ngezinto ezibonakalayo ze-Q235B. Ngemuva kokushisela, ukufuthelana kuyenziwa ukuqeda ukucindezeleka kwangaphakathi kwento. Indawo yesitimela esiqondisa i-Fuselage enamakhona amabili womgwaqo oyisiqondisi
Type Transmission uhlobo
Igiya lokudlulisa, i-crankshaft kanye nenduku yokuxhuma kuhlanganisiwe engxenyeni engenhla yomshini. Imoto enkulu ifakwe ebusweni bokulinganisa obungemuva kohlaka, ifreyimu, iklatshi, njll
Esimweni sohlangothi lwangemuva lohlaka, i-flywheel ihlolwe ibhalansi ngaphambi kokuhlangana.
Ingxenye yegiya isebenzisa indlela yokuhambisa izinyo eqondile, futhi okokusebenza kwayo kwenziwa ngensimbi enamandla kakhulu engu-42CrMo, futhi ukwelashwa okushisayo okuhambisanayo kuyenziwa.
Dry low inertia clutch / brake. Isistimu yokulawula i-clutch / brake ifakwe nedivayisi yokuthola engajwayelekile.
Yonke imiphongolo etholwayo yenziwa ngezinto ezingavumelani nokugqokwa ngethusi okwenziwe ngethusi.
Isilayida senziwe ngezinto ze-HT250. Umhlahlandlela usebenzisa umhlahlandlela onxande onamacala amabili ayisithupha,
Ubuso obuphansi besilayidi se-slide kanye nendawo ephezulu yetafula ine-T-groove, esetshenziselwa ukufaka isikhunta. Ukuphakama kwesilayidi esishelelayo kulungiswa ngemoto kagesi ngaphezu kwamathani angama-80 (kufaka phakathi).
Sebenzisa uhlelo lokuvikelwa ngokweqile lwe-hydraulic othomathikhi.
Umshini uthanjiswa ngebhotela elisebenza ngogesi futhi unama-alamu asezingeni eliphansi lamafutha, ngakho-ke kuphephile futhi kunokwethenjelwa. Isilinganisi: ipompo yokuphakelwa ibhotela ngesandla.
⑸ Ukulinganisa uhlelo lwedivayisi
Hlakulela uhlobo lwengcindezi yomoya wesilayidi se-block block, ingcindezi yomoya ingalawulwa ku-valve elawula ingcindezi yomoya.
Imishini kagesi ilawulwa yi-PLC, ifakwe isikhombimsebenzisi esinamandla somshini womuntu, futhi ikhonjiswe ngesikrini sokuthinta semikhiqizo edumile.
Kubekwe kuphaneli yokusebenza enkulu, le misebenzi elandelayo ingafinyelelwa:
①Isikrini sokuthinta sikhombisa izinhlamvu zesiShayina (noma shintsha phakathi kwesiShayina nesiNgisi), okulula nokuqondakala kalula, futhi kubonisa amapharamitha wedatha ahlukahlukene emaphephandabeni, njengenombolo yemivimbo, i-electronic CAM Angle, njll. setha ngokusebenzisa isikrini sokuthinta;
② Khombisa ukuhamba kokusebenza komshini, ukuze opharetha akwazi ukusebenzisa umshini kalula，futhi inenkomba yesimo sokugeleza okuyinhloko ；
③ Ukusebenza nolwazi lokwehluleka ukubonisa, ukuze opharetha nabanakekeli basheshe ukuxazulula izinkinga zabezindaba, banciphise isikhathi sokuphumula;
Umsebenzi wokuqapha we-PLC wokufaka / wokukhipha umsebenzi wesikhathi sangempela;
Setha isikrini sokubalwa komkhiqizo, esingakhombisa ukubalwa komkhiqizo kwamanje ngesikhathi sangempela, bese usetha inani elihlosiwe lezingcezu zomsebenzi.
Press Umshini wokulawula kagesi usebenzisa ugesi wesigaba ezintathu, i-380V, i-50Hz.
Motor Imoto enkulu ifakwe ukulayishwa okushisayo kanye nesivinini se-zero isivikelo sokulwa nokubuyiselwa emuva.
⑧ Ukufezeka komsebenzi ngamunye wokulawulwa kwesibhakela kunochungechunge oluhambelana nokuphepha. Iphaneli ifakwe ukukhanya kwesikhombisi sephutha nenkinobho yokusetha kabusha ukuqedela umsebenzi wokusetha kabusha ngemuva kokuqinisekiswa kwephutha.
5.3 Imodi yokusebenza
Cindezela ukusetha i-inching, izindlela ezi-single, eziqhubekayo zokusebenza ezintathu. Imodi yokusebenza ikhethwa yiswishi futhi ilawulwa maphakathi yinkinobho.
Stop Inkinobho yokumisa okuphuthumayo: cindezela inkinobho "yokumisa okuphuthumayo" uma kwenzeka ukusebenza okungavamile komshini. Umshini unezinkinobho ezintathu zokuma okuphuthumayo.
Omunye kuphaneli yokulawula ukusebenza, eyodwa kukholamu, eyodwa etafuleni lokusebenza ngezandla ezimbili; Cindezela noma yiziphi izinkinobho zokuma okuphuthumayo bese umshini uzoma ngokushesha. Ukuma kwenkinobho yokumisa okuphuthumayo kukholamu kungamamitha ayi-1.2 ukusuka phansi, okuhlangabezana nezidingo ze-ergonomics；
Inkinobho yokusebenza kwezandla ezimbili: umkhawulo wesikhathi sokuvumelanisa owehlisela phansi ngu-0.2-0.5s;
Protection Ukuvikelwa kokugcwala ngokweqile: i-slide block ifakwe ngohlelo lokuvikelwa kokugcwala ngokweqile ukuze kuqinisekiswe ukuthi umshini ngeke ulimaze umshini futhi ufe ngenxa yokugcwala ngokweqile.
Ukugcwala ngokweqile ngemuva kwesilayida esihlala endaweni ephansi efile, kungasebenzisa kuphela i-inching, ukubuyisela emuva endaweni ephezulu efile yokulungiswa nokucindezelwa, ukusebenza.
6. Ukucushwa kwemishini
6.1 Ingxenye eyinhloko yokwakhiwa
Izinto zokwakha, izindlela zokwelashwa
Izinto zokwakha Q235B
Izinto zokwakha i-42CrMo, icishiwe futhi ithukuthele Hs42 ± 20
Izinto zokwakha i-HT-250
Izinto zokwakha 45
Izinto ZQSn10-1 Tin phosphor yethusi
Izinto zokwakha i-40Cr, zicinyiwe futhi zivuthwe i-Hs40 ± 20
Izinto zokwelashwa QT-500 Blunting
Ikhanda lebhola leSawtooth
Izinto zokwakha i-HT-250, ama-high frequency quenching hrc45 degrees ngaphezulu
Ithusi (umkhono wethusi)
Izakhi eziyinhloko ze-6.2 / umkhiqizo
Isilayidi sokulungisa imoto
Dry bamba ukubopha
I-valve ye-solenoid ephindwe kabili
Edluliselwe Thermal, isixhumi asizayo
Ingcindezi yokunciphisa i-valve
Futha umfutholuketshezi okweqile
Inkinobho yezandla ezimbili
Iphampu kawoyela yokugcoba kagesi
I-USA Timken / TWB
Hlela kabusha ikhawunta
Ukushintshwa kwesigaba esiningi
Idivayisi yokushaya umoya
Isibani sikhanya ngokukhanyayo
Isixhumi esibonakalayo sokutholwa okungalungile sigodliwe
Ukwenza izintambo nge-PLC
Idivayisi yokuvikela isithombe
Izesekeli ze-6.3, uhlu lwamathuluzi akhethekile
Ongakukhetha / okujwayelekile
Amathuluzi wokulungisa kanye nebhokisi lamathuluzi
6.4 Uhlu lwemishini ekhethekile (yezinketho)
Idivayisi yokuthola engalungile
Idivayisi yokuthola iphoyinti efile ezansi
Rapid isikhunta ekushintsheni idivayisi
I-die pad (isiguqo somoya)